Ukubika Inkinga YeWindows heater: ngobuhle nangobubi bawo. Convector heater noma uwoyela - okuyinto engcono? Dlulisa amehlo, qhathanisa, izici kanye nokubuyekeza
Namuhla, abathengi zivamile ngokwanele convector heater, izinzuzo nezingozi ukuthi kufanele kubhekwe ngaphambi kokuthenga imishini. Amadivayisi anjalo ukusebenza ngempela buthule, ungathathi isikhala kakhulu, futhi bheka aesthetically elimnandi. Idivayisi akuyona kuphela icwecwe futhi amahle, kodwa futhi kahle. Zingasetshenziswa efulethini, endlini yangasese noma ehhovisi.
Lichaza uhlobo heater kuyahluka design kahle elula. Ngaphakathi izindlu, okuyinto has a ububanzi ezincane, element Ukushisa kuyinto operable kusukela amapayipi. Amazinga Ukushisa kulawulwa thermostat, isibambo zazo isendaweni iphaneli yangaphandle. Ngo inqubo yokukhiqiza kwensimbi bezinhlamvu ka 0.8 mm isetshenziswa.
Umthengi izibuyekezo mayelana convectors ngokukhetha
Ukubika Inkinga YeWindows heater, izinzuzo nezingozi ezichazwe kulesi sihloko, umbono umthengi, kumele kukhethwe kuye ngobukhulu kudivayisi, amandla ukusetshenziswa ezihlukahlukene Ukushisa isici. Kubalulekile acabangele ezengeziwe izinkampani ukusebenza, ukusebenza, ukulondeka, izindleko, kanye nokukhiqiza. Ngokusho abathengi, amandla kumele akhethwe kuye inkulu kangakanani Igumbi kuthiwa sishiswa ngakho. Ngokwesibonelo, uma kucatshangwa ukusebenzisa imishini njengoba nesisekeli main bafudumale system ngesikhathi lapho okwamanje Stoke noma isizini Ukushisa seliqediwe, amandla kufanele ibalwe ngendlela elandelayo. Ngayinye imitha cubic kwegumbi edingekayo 25 Watts. Uma Ukushisa endlini futhi akusho, alindele amandla okudingayo, esekelwe yokuthi 40 Watts yadingeka imitha ngalinye cubic ngeke.
Ukukhethwa Ukushisa isici
Uma ucabangela Ukubika Inkinga YeWindows heater, izinzuzo nezingozi okuyizinto kubalulekile ukucabangela ngaphambi kokuthenga, ke udinga ukuba banake uhlobo Ukushisa isici. Ochwepheshe batusa ukuba ukhethe amadivayisi enikezwe waphonsa heater Monolithic, lokhu kungenxa yokuthi imishini izothatha isikhathi eside isikhathi futhi izosebenza nge ngekhono elingcono. Abaningi zomthengi wanamuhla manje ukunquma sendlela ukhethe heater Ukubika Inkinga YeWindows, iseluleko kule ungafunda kulesi sihloko. Kubalulekile ukuba acabangele ukuthi wawungakanani kudivayisi.
Ikakhulukazi, ochwepheshe batusa ukuba banake ukuphakama. Kulo kuzoya kakhulu ngokuthi yikuphi emoyeni izoya nabanye isivinini. Ngokwesibonelo, convectors ongaphakeme, obude kuyinto cm 60, sizonikeza ukunyakaza okusheshayo emoyeni uquqaba, okwakuyoholela lula Ukushisa okusheshayo egumbini. Lapho ekhetha convector heater, izinzuzo nezingozi ukuthi kufanele kubhekwe ngumthengi, kubalulekile ukuba banake futhi ukuphepha wokusebenza.
Convectors, ngokubona abathengi amadivaysi nephephile for bafudumale. Lokhu kungenxa yokuthi izindlu uyabaselwa kuya degree 60, kodwa hhayi ngaphezulu. Yingakho imishini enjalo kuwusizo lapho kukhona khona izingane ezincane.
Izibuyekezo mayelana namathuba ezengeziwe
Ukukhetha i-efulethini noma indlu convector yakho heater, kufanele ucabangele ukuthi kungase kuhlinzekwe ngemisebenzi ezengeziwe, okuyilezi isilawuli lokushisa evumela ukulungisa ezingeni Ukushisa. Thermostat igcina lokushisa okungukuthi ukhululekile kakhulu Sebawoti. Isikhathi ikuvumela ukuba uvule imishini kuphela isikhathi esithile, ngemva kwalokho-ke kuyoba bazibandakanye kudivayisi Ukunqamula ukuxhuma. Uma unesithakazelo heater convector, izinzuzo nezingozi zazo echazwe esihlokweni, ungakhetha imodeli ukuthi unesikhathi ionizer esakhelwe ngaphakathi. Yena unesibopho ukumuncwa uthuli, ngokugcwalisa umoya ion ezimbi. Labo abathengi abakhathazeke ngempilo yabathandekayo babo, khetha Izinketho nale kwalokho.
Convector heater, ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo ukuthi kufanele kubhekwe nguwe, futhi angase abe kude ukuthi kusiza ukusebenza unit. Isici esibaluleke kakhulu kwemibono umthengi, kuyisivikelo ngokumelene ekuqedweni okuyinto esihambelana ikhaya nezingane nezilwane. Ukuqhathanisa amanani imishini efanayo, kanye anqume ukuthi imiphi convector ukhethe, kudingeka ucabangele lokho yinto enhle akukwazi eliphansi kakhulu intengo. Uma ukhetha kufanele akhokhe amehlo akhe ebheke brand bezibonakalise emakethe izimpahla ezifanele. Abanikazi convector heater ukugcizelela ukuthi imishini enjalo liyosula emoyeni. Ukuze uxazulule le nkinga ngaphandle kokuba elihambisana indlela obusebenzayo ingasetshenziswa ne ithangi lamanzi.
Sibutsetelo izici qualitative ka convectors kagesi
Ngaphambi ukhetha heater Ukubika Inkinga YeWindows, kumele uzijwayeze izici eziyisisekelo amamodeli ethulwa emakethe. Ngokuqondene namandla, ke ziyahlukahluka kusuka Watts 250 kuya ku-3000. Amandla aphansi isetshenziswa njengoba umthombo obengeziwe ukushisa, kanti imodeli ne exponent yayo eliphakeme angasetshenziswa njengoba Ukushisa main. endaweni evuthayo ziyahlukahluka kusuka 1 kuya 35 square metres. Uma sikhuluma amakamelo esikhulu kakhulu, Ukushisa kungaba nzima kakhulu.
Ukukhethwa kufanele wenze kuphela ngemva kokuba sewazi ukuthi hlobo luni Ukushisa element efakwe ngaphakathi. Kungenzeka Monolithic noma tape isici, kanye PETN. Ochwepheshe batusa ukuba athonye ukhetho lwabo lokuthi umusa Ukushisa elementi uhlobo Monolithic. Ukukhetha heater convector? Ukubuyekeza, izimiso yokusebenza - konke lokhu kufanele uqale ezobhekwa. Nokho, kubalulekile ukuba banake futhi uhlobo ukufakwa, okungaba udonga noma phansi. Uma imishini izosetshenziselwa kuphela egumbini elilodwa, kungcono makudle odongeni-entabeni izinhlobo. Lokhu kuyokwenza ugcine isikhala egumbini.
Inani okuthintekayo ukuphathwa, okungukuthi sezinzwa, mechanical nobe elekthronikhi. Izinhlobonhlobo sokuqala ngempela ezingavamile, kodwa kuyabiza ngaphezu kwabanye. Uma namanje awukwazi ukunquma ukuthi iyiphi ukukhetha i-thermostat, kungcono makudle elektroniki, kusetshenziswa imishini Zishiya. Umgomo we operation imishini ukuhamba emoyeni uquqaba. I ephansi ukuphakama idivayisi, lo ngokushesha endlini efudumele. Inkomba ongafinyelela izinombolo 65 amasentimitha.
Ikakhulukazi uwoyela heater
Uma uphakamisa umbuzo lokho kungcono - convector noma uwoyela heater, kufanele ucabangele kokubili idatha yedivayisi. Eyokuqala yalezi iye echazwe ngenhla, kanti eyesibili izogxila kamuva kulesi sihloko. Phakathi izimfanelo ezinhle ungakhetha ukusebenza buthule, eziphansi, futhi adambise ukuthuthela amabanga ehlukene. Kulokhu, kakhulu, kubalulekile ukukhetha umthamo kwesokudla, isidingo uholwe ukuphakama ophahleni. Uma lesi sibalo esingaphansi 3 metres, ngoba Ukushisa ephumelelayo 10 square metres Igumbi uzodinga ukuthenga kurediyetha, amandla okuyinto ilingana eyodwa kilowatt. Ukudayiswa kungabonwa lokubolekwa emandleni akhe kuhluka 1 kuya ku-2.5.
Ukuqhathanisa konke kwamafutha nakho convector heater
Uma unquma ukukhetha Ukubika Inkinga YeWindows heater, izinzuzo nezingozi idivayisi kubalulekile ukucabangela ngisho phambi kohambo oluya esitolo. Kusukela uwoyela, amadivayisi njenge zihlukile sikebhe ukuma okungukuthi bushelelezi futhi flat. Amafutha amayunithi ngokuvamile ibekwe phansi, okuyinto eveza umahluko phakathi kwabo kusukela convector. Uma wayefisa, ungakwazi ukufaka ngisho baseboard heater, ukuphakama ongafinyelela 15 amasentimitha ubude ukuqala at 1500 cm Uma ungakwazi ukunquma ukukhetha convector noma uwoyela heater, okuyinto engcono izinsimbi ezimbili -. Kuzokusiza uqonde ulwazi okusesihlokweni esithi.
Amadivayisi ingafaniswa nomunye ngokuya kahle ukusetshenziswa. zinhlobo oily ibusa 1/4 kagesi ngaphezu convector. Ngenxa yokuthi amanani kagesi njalo liphuma, lokhu isici kungaba kubalulekile uma uthenga idivayisi. Izimo zethu zihluke kakhulu ezibalulekile futhi inkathi efudumele up. Ngosizo heater uwoyela wenziwa izigaba eziningana. ugesi Okokuqala ikhuthaza Ukushisa PETN, okuyinto heats amafutha, lona wamuva ikhiqiza ukushisa kuya emaphethelweni izindlu. Le nqubo ingathatha isikhathi eside, kuyilapho ethile kagesi is yokuqothulwa. Ngakho, abathengi bathi emva imishini egumbini efudumele ngesikhathi esisodwa. Zihambisane inqubo ikani afakwa abalandeli uwoyela i-heater. Uma sikhuluma mayelana convector, ngokushesha uqala ukushisa emoyeni, kanye nekusebenta kulokhu 95%. Ukushisa izinga akuyona okusezingeni eliphezulu kunjalo, le cooler uwoyela, okuyinto ifakwe fan, nemibandela eyengeziwe uwina convector.
Yikuphi okungcono - convector noma uwoyela heater
Uma ungakwazi ukunquma ukuthi ukhethe - noma uwoyela convector heater, okuyinto engcono amadivaysi amabili kuzovumela ukuqonda ulwazi mayelana ngamunye amayunithi. Sikhuluma ukufakwa futhi kalula ethwele. Convectors kulokhu kukhona mobile kakhulu futhi elula. Isisindo sawo ingeqi 10 khilogremu, kuyilapho amadivayisi uwoyela ayesinda futhi okukhulu kakhulu. Isisindo sawo ahluka amakhilogremu 18 kuya 25. Convectors, okuyinto anemisila amasondo ukuhambisa kahle ngokwanele, futhi uma abaqinise odongeni, ke uyobasindisa eningi isikhala, okwenza kube yokuhlanza lula. Phakathi kwezinye izinto, izinga lokushisa ekhishwa convector ukhululekile esengeziwe womuntu.
Uma ungakwazi ukunquma ukuthi ukhethe - uwoyela heater noma convector iyunithi, kubalulekile ukucabangela futhi ukuphepha. Kufanele kuqashelwe ukuthi amafutha hot akulona ikhambi best. It uyakwazi ukufudumeza umzimba kangangokuthi kuba lula bashe. Njengoba i okuhlukile ukukhonza labo onobuhle, okuyinto ayanikezelwa ukuze inqubo ukukhiqizwa a bezinhlamvu zokuzivikela.
Uma ungakwazi ukunquma lokho ukukhetha - uwoyela heater noma convector iyunithi, kubalulekile ukuba sithembele umbono ongoti kulo mkhakha abakuxwayisa ukuthenga owokugcina onobuhle okukhulunywa. Balondekile, ethule futhi kulula ukusebenza.
The best ekhaya yaseshashalazini Samsung: ukubuyekezwa, ukubuyekeza imifanekiso ethandwa
Isithombe sangemuv ophahleni kuyinto emuva in fashion
Indlela yokwenza kushimula ngoba izitofu ngezandla
Indlela ukukhetha strip LED ukuze indlu? Yiziphi izinhlobo, amandla umbala ukukhanya?
I-smartphone "Samsung Galaxy Win Duos" (incazelo, izibuyekezo)
Utshani for namakati - umthombo wezempilo
Cream "aqunge" Yelulela: Iziqondiso Sebenzisa, ukubuyekezwa